EyeThupha ngo-2021-Funda ukuRhweba
Inyanga: Agasti 2021
Ukuhlaziywa kweDola yokuThengisa iiDrive kwi-EURUSD Ukophula iMark 1.18
Ngasemva kwesikhundla esandisiweyo esinyusiweyo kwidola, isibini sokurhweba kwiiveki eziphakamileyo zeeveki ezininzi njengoko abatyali mali behlalutya Iposti kaPowell-kaJackson Hole Amagqabantshintshi kunye nomyalezo wesilumkiso, ngelixa ukuphela kwenyanga kuhamba ukongeza kwisithokothoko se-USD.
Idola yokuthengisa iqala kwakhona namhlanje, nge-EUR / USD ekugqibeleni yaphula kwinqanaba le-1.18. I-NZD, kwelinye icala, ibuya ngamandla emva kokuba inombolo yecala le-Covid iwele kwelona nqanaba lisezantsi kwiintsuku ezintandathu. Nangona kunjalo, iimarike zihlala zahlulwe kwenye indawo, i-Euro ibonisa amandla, ilandelwa yiSterling. Iidola zaseCanada naseAustralia zisala ngasemva kwedola yaseNew Zealand.
Ukulandela ukubuyela okuqinileyo kuka-Lwesihlanu kunye nesenzo semarike esingaqondakaliyo, i-EUR / USD iqhubele phambili kumantla omgca we-1.1800. Nangona kunjalo, intshukumo imisiwe ngaphambi kwe-1.1850 ukuza kuthi ga ngoku ngoLwesibini.
I-Eurozone Shrugs inyuka ngokunyuka kwi-Index yamaXabiso abaThengi
Kwiinyanga ezidlulileyo, ukunyuka kwamaxabiso kuye kwaba lixesha phakathi kweebhanki eziphambili, ngakumbi eMelika. Ngaphandle kokuqinisekiswa kweFed ukuba ukunyuka kwamaxabiso yinto nje yokwexeshana kwaye kuya kudamba, iimarike ziyaqhubeka ukuba nexhala. I-ECB ikwimeko engaqhelekanga yokujongana nokunyuka kwamaxabiso ngelixa ikwaqinisekisa abatyali mali ukuba ukonyuka kuyadlula. Lo myalezo, nangona kunjalo, awunakufane ukholise iimarike, ezilindele ukuba iBhanki ibonelele ngengqondo ethile kulowo uza kuba ngumrhwebi.
I-European Central Bank kutsha nje ihlaziye isikhokelo sayo, isithi ayizukunyusa amaxabiso ngaphandle kokuba kukho ubungqina bokuba ukunyuka kwamaxabiso kuya kuhlala "kuzinzile" kufutshane neepesenti ezimbini. Iminyaka, ukunyuka kwamaxabiso bekuphantsi kakhulu kwithagethi, kodwa kulindeleke ukuba idlule kulo nyaka.
Kwintlanganiso kaSeptemba, abenzi bomgaqo-nkqubo kulindeleke ukuba bajongane nexesha le-taper yenkqubo ye-bond engxamisekileyo. Okwangoku, xa kusiziwa ekucofeni, i-ECB isalele ngasemva kwiFed kwaye ayinakulindeleka ukuba ityhile naliphi na ixesha elibekiweyo ngaphambi kukaDisemba kwangoko. I-Fed kusafuneka ichaze ixesha elincitshisiweyo, kwaye i-Central Bank yase-Europe ayinakulindeleka ukuba iphinde ibekho malunga nokunciphisa amabhongo.
tags IDOLI, IYUROZONE, EURUSD
Izizathu ezi-7 zokuba kutheni ii-Cryptocurrensets zezona ziseti zibalaseleyo kurhwebo
Ukuhlaziywa: 31 October 2021
Abantu abaninzi kwihlabathi liphela bakholelwa ukuba inkqubo yangoku yemali iphelelwe lixesha kwaye kufuneka yenziwe kwikhompyutha. Eyona ndlela ilungileyo yenkqubo yemali elawulwa yibhanki kukusebenzisa iMali egunyazisiweyo, njenge-cryptocurrency. I-Cryptocurrency yimpahla yedijithali enokusetyenziselwa ukuthenga iimveliso kunye neenkonzo zombini kwi-intanethi nakwi-intanethi, kunye neendleko zokuthenga ngexabiso eliphantsi. Kule mihla, ukuThengiswa kweDijithali yemali yenye yeendlela ezithandwayo zokufumana imali yokwenziwa online. Kule nqaku, siza kugubungela i-7 izibonelelo ezibalulekileyo zokuba kutheni ukurhweba kwe-Crypto kuluncedo ngakumbi kunokuthengisa ezinye iiasethi.
1. Imirhumo yentengiselwano ephantsi
Eyona ngxaki iphambili esinayo nolunye urhwebo lwemali ziindleko ezinkulu zokuthengiselana ezihlawuliswa yibhanki kuthi ukuze sigqibe intengiselwano. Zininzi iimali esihlawuliswa yibhanki ngentengiselwano enje ngeefizi zokuqhubekeka, iimali zolondolozo, iifizi zonyaka, njalo njalo. Kwaye xa unentengiselwano eninzi yokwenza imali, oku kuyacaphukisa kwaye kuyabiza. Kwelinye icala, ii-cryptocurrensets ziphantsi, ngenxa yoko intengiselwano yoontanga yenziwa ngemirhumo esezantsi. Nangona kunjalo, Izikhwama esiyisebenzisayo ukugcina ezi ngqekembe zingena kwintlawulo encinci yentengiselwano, engabizi kakhulu xa ithelekiswa nemicimbi yemali ye-fiat. Esi sisibonelelo esibalulekileyo sokusebenzisa urhwebo nge-cryptocurrency.
2. Intengiselwano eyimfihlo
Inkqubo ye-cryptocur lwemali yenziwe zii-algorithms ezilawula yonke inkqubo, esi sisibonelelo esikhulu kubarhwebi be-Cryptocurrency kuba ukuthengiselana okwenziwe ngabantu konke kuyimfihlo kwaye akunakubonwa nangubani na, ngokungafaniyo nenkqubo yebhanki egcina irekhodi layo yonke imicimbi wenza intanethi okanye ngaphandle kweintanethi. Kananjalo kuzo zonke iinkqubo zesiko, xa usenza intengiselwano ethile, ulwazi lwakho lwebhanki ngamanye amaxesha lwenziwa lufumaneke kubantu abathile, le yinto enkulu kubantu abathile abaxhalabile kukhuseleko lwabo kwaye bafuna ukugcina imicimbi yabo iyimfihlo.
3. Iidijithali zemali ziyanyuka kwixabiso lentengo
I-cryptocurrensets kuphela kwempahla yexabiso yorhwebo enganyangekiyo ngokwexabiso lentengo. Kuba akukho mntu uphakathi kwii-Cryptocurrensets, ezinjengebhanki okanye urhulumente, uninzi lweethokheni azifumani kunyuka kwamaxabiso. Oku kwenzeka ngenxa yokuba uninzi lweethokheni, ezinjengeBitcoin, zinezinto ezimbalwa ngexesha elithile; umzekelo, i-Bitcoin inexabiso elipheleleyo le-21 yezigidi ze-bitcoins ezinokumbiwa. Ii-asethi zesintu kwelinye icala, njengemali esiyisebenzisayo, zilawulwa ziibhanki kunye norhulumente, into ethetha ukuba banokuprinta imali engakumbi nanini na xa befuna, nto leyo ibangela ukunyuka kwamaxabiso, nto leyo eyeyona nto iphosakeleyo kwezi asethi.
4. Iitransekshini ezilula
Inkqubo yokulungiselela ukuthengiselana inzima kakhulu kwiinkqubo zesiko, kunamaphepha amaninzi ukugcwalisa ukuba ufuna ukuthumela imali komnye umntu okwelinye ilizwe okanye uthenge nantoni na konke oku kungenxa yokuba kwezinye iiasethi kukho Umntu ophakathi olawula kwaye avume ukuthengiselana esikwenzayo, umzekelo, intengiselwano esiyenzayo ngeebhanki ithatha ixesha elininzi ukuyilungisa kwaye oku ngamanye amaxesha kunokuba nzima kakhulu. Kodwa, enkosi kumntu ngamnye kuthungelwano lwontanga kulwakhiwo lwe-imali yedatha, yonke le micimbi ayisasebenzi. Ngoku, i-Cryptocurrencies ivumela umrhwebi ukuba athumele ngqo ii-Crypto zemali kumntu abaqhuba intengiselwano naye.
5. Khuselekile kakhulu
Iidijithali zemali zikhuselekile xa kuziwa kukhuseleko. Inkqubo ye- Maqonga ekuvumela ukuba urhwebe ngeemali zedijithali ziye zaphucuka kakhulu kwaye zikhuselekile kangangokuba nabona baduni banobuchule abakwazi ukuba iimali zakho zemali. Ukuba unqwenela ukuvula isipaji ukuze ugcine iimali zakho, amaqonga aya kucela ukuba ubonelele ngamaxwebhu afana ne-ID yakho, ipaspoti, njalo njalo. Oku kubonisa ukuba ukurhweba nge-crypto kukhuselekile kakhulu. Nangona kunjalo, kuya kufuneka usoloko ulumkele abakhohlisi abanokufumaneka kwi-intanethi iphela, kuba banokuthatha lonke ulwazi lwakho kunye neethokheni.
6. Ii-cryptocurrensets zezona asethi zorhwebo zinenzuzo enkulu
Ukutyhubela imbali, ii-cryptocurrensets zibonise amandla abo okubetha ixesha lonke xa imarike ishushu. Ukukhula okuthandwa kakhulu zii-Cryptocurrensets zezi Bitcoin, eyayinexabiso lama- $ 6500 ngo-Matshi 2020 kunye nexesha elipheleleyo lama- $ 64,863 ngo-Epreli 2021, EthereumIxabiso ngo-Agasti ka-2016 yayiyi- $ 11.26, kwaye inyuke nge-4,362 yeedola ngoMeyi 2021, emele ukukhula kwexesha elide. Yomibini le mizekelo isetyenziselwa ukubonisa ukuba amaxabiso e-Crypto's amaxabiso anokuphindaphindeka kwixesha elifutshane, njengonyaka omnye, okanye kwithuba elide, njengeminyaka emi-1. Le nzuzo inokukwazi ukuvelisa i-Cryptocurrensets kuwe ayinakuthelekiswa nayo nayiphi na enye indlela yokurhweba kuba yi-Cryptocurrensets kuphela enesakhono sokuvelisa ezi nzuzo ngexesha elifutshane.
7. Vula ukuthengisa ngalo lonke ixesha
Inkqubo yokurhweba nge-imali yedatha isasazwa, oko kuthetha ukuba akukho mntu uyilawulayo kwaye ivulelekile ukuba ithengiswe iiyure ezingama-24 ngosuku, iintsuku ezisixhenxe ngeveki. Nangona ihlala ivulekele urhwebo, imarike ngamanye amaxesha ifumana uhlaziyo olutsha oluthatha ixesha ukulungisa. Nangona kunjalo, uninzi lweenkqubo zokurhweba azinalo olu phawu, nto leyo elusizi kubo.
Esona sizathu siphambili sokuba i-Cryptocurrencies ivuthelwa yinto entsha. Owona mzekelo ubalaseleyo ngulo Ngaphaya kweProtocol. I-Beyond Protocol ichazwa njenge-"High-Level Protocol" yeyona node yonxibelelwano. Ii-Cryptocurrencies yeyona asethi ibalaseleyo onokutyala kuyo ukuba ufuna ukwenza imali ngexesha elifutshane. Nangona kunjalo, ngelixa i-Cryptocurrencies inokuba nenzuzo kakhulu ixesha elininzi, inokuba nzima kwaye ingathandeki ukurhweba nayo ngenxa yokunyuka nokuhla kweemarike, kodwa ekupheleni kosuku, nokuba ulahlekelwa yimali ethile, i-Crypto. unamandla okuphinda kabini loo mali ngemizuzwana, ukuba kutheni kufuneka uhlale ukhumbula ukuba kufuneka uhlale uzolile kwaye ube nomonde ngelixa uthengisa i-Cryptocurrencies kuba ukuba banokunyuka okukhulu, baya kuhlala benokunyuka emva koko, kwaye ixabiso liya ukwandisa kakhulu kukwenza ube nengeniso eninzi.
I-Litecoin ikulungiso olusezantsi, ngoMeyi unokuphinda abuyele kwiZantsi edlulileyo kwi- $ 166
I-LTC / i-USD kulungiso olusezantsi phakathi kwe- $ 163 kunye ne- $ 190
I-Litecoin ithengisa nge- $ 170 ephezulu
Litcoin (LTC) Izibalo zangoku
Ixabiso langoku: $ 171.02
Intengo yeNtengiso: $ 14,418,302,165
Umthamo wokuThengisa: $ 2,274,197,774
Iindawo ezinkulu zokubonelela: $ 400, $ 420, $ 440
Iindawo ezifuna kakhulu: $ 200, $ 180, $ 160
Litecoin (LTC) Uhlalutyo lwamaxabiso nge-Agasti 31, 2021
I-Litecoin's (LTC) Ixabiso lihamba ngendlela esecaleni kwinqanaba elingaphantsi kwe-190 leedola. Kwiiveki ezidlulileyo, iLitecoin ibisoloko iguquka phakathi kwamanqanaba e-163 ukuya kwi-190 yeedola. Namhlanje, i-altcoin ibuyela phezulu emva kokuwa kuluhlu lwamaxabiso asezantsi. Iimarike zikhula ukuphinda ziphinde ziphikise ngaphezulu kwe- $ 190. I-LTC / i-USD iya kuphinda iqale kwakhona ukuba ukunganyangeki kwi- $ 190 kwaphuliwe. Ukuba abathengi baphumelele, i-altcoin iya kufikelela kuma-240 eedola. Kwelinye, ukuba iibhere ziyaqhekeka ngaphantsi kwexabiso lamaxabiso asezantsi nge- $ 163. I-Litecoin iya kuqhubeka iyehla iye kwi-152 yeedola.
I-LTC / i-USD - Itshati yemihla ngemihla
I-Litecoin (LTC) iZalathi zoBuchule zokuFunda
I-Litecoin ikwinqanaba lama-51 le-Index ye-Relative Strength Index 14. Ibonisa ukuba kukho ulungelelwaniso phakathi konikezelo kunye nemfuno. I-altcoin ingaphantsi kwe-40% ye-stochastic yemihla ngemihla. Iintsuku ezingama-21 kunye nee-SMA zeentsuku ezingama-50 zithambekele phezulu zibonisa ukuba phezulu.
I-LTC / USD-4 Itshathi yeYure
Namhlanje, uLitecoin wayesenza ukulungiswa phezulu ngaphambi kokuba aphindwe kwi-175 yeedola. Ixabiso le-LTC liyehla kwaye linokufumana inkxaso ngaphezulu kwexabiso lamaxabiso asezantsi. Kwiintshukumo zangaphambili zexabiso, abathengi bayikhusela inkxaso yangoku.
tags Litecoin, LTC, LTC / USD, Uhlalutyo lwamaxabiso
I-USDCHF iyawa ngaphantsi kwe-0.9150 njenge-US Dollar Index Stays Pressured
Uhlalutyo lwamaxabiso e-USDCHF-Agasti 30
Kwiyure zokuqala zaseYurophu ngoLwesibini, idola yaseMelika yawa ngokuchasene nefranc yaseSwitzerland. Aba babini babuyela umva phantsi kwemimandla ye-0.9150 kwaye babhala ezantsi kwi-0.9130 ngexesha lesithuba. Inkqubo ye- Isalathiso seDollar yaseMelika (I-DXY) inyuka ngokuvumelanisa ngokugqibeleleyo kunye nemilinganiselo yeminyaka eli-10, ukuhlala icinezelwe phantsi kwe-93.00, kuthintela ukukhula kwe-USDCHF.
Amanqanaba okumelana: 0.9375, 0.9275, 0.9175
Amanqanaba enkxaso: 0.9101, 0.9050, 0.9000
Ukusukela ukuba i-USDCHF isilele ukushenxisa isithintelo esikhawulezileyo esikufutshane ne-0.9200, imeko ngoku ithanda abathengisi, ngamaxabiso angaphantsi kwe-MA 5 kunye ne-MA 13 kwaye malunga ne-0.9130 iba yinto enzima yokuqhekeza i-USDCHF bearish. Ngelixa sigcina ukungakhethi cala ngaphezulu kweli nqanaba, oku kuyaqhubeka ukubonisa ukuba inkxaso inokubanjwa.
Ngengqondo ebanzi, ukwehla kwinqanaba le-0.9242 kuthathwa njengenqanaba lesithathu lepateni ukusuka kwinqanaba le-0.9472 (eliphezulu). Okwangoku akukabikho umhla wokugqitywa. Ukuba imeko iyaqhubeka, ithagethi elandelayo inokuba yingqikelelo yeepesenti ezingama-138.2 ukusuka kwi-0.9472 kumanqanaba e-0.9018 ukuya kuma-0.9200.
I-USDCHF ibuyile kwinqanaba le-0.9200, isusa indawo yokudibana ye-0.9150. I-biad yangaphakathi yangaphakathi ibuyiselwe umva kwicala elingezantsi lovavanyo olusezantsi lwe-0.9101. Kukho ithuba elihle lokuba ikhefu eliqinileyo liza kuqala imeko enkulu yokuhla apho. Ukophulwa kwenqanaba lokuxhathisa elincinci le-0.9175 kwicala elinyukayo kubalulekile ukubonisa impumelelo yokuhla kwinqanaba le-0.9242.
Nangona kunjalo kwimeko yokubuyela kwimeko yesiqhelo, nangona kunjalo, imeko inokuthi ihlale ihleli kancinci. Nangona kunjalo, utshintsho olukhulu lwenkxaso ye-0.9150 yajika inqanaba lokumelana inokuba luphawu lwangaphambili lokuguqula imeko kunye nokuhambisa ukugxila kubuyela kwi-0.9200 yezithintelo eziphambili zokuqinisekisa. Ukuqhubeka kokurhweba ngaphantsi komndilili wokuhamba, ujikeleze i-0.9130, amanqaku e-USDCHF kwicala lomgca wokuhla, ujikeleze i-0.9101.
ICardano (ADA / USD) Ixabiso elinokuthi libuye umva kwinqanaba le-3.0 leNqanaba lokumelana
Uhlalutyo lwamaxabiso e-ADA-Agasti 31
Umgangatho weBullish unokumiswa kwinqanaba lokumelana ne- $ 3.0 kwaye inokujongana nenqanaba lenkxaso kwi-2.6 yeedola, ukuba ingene, i-2.3 yeedola kunye ne-1.8 yamanqanaba anokujolisa. Kwimeko apho iinkunzi zeenkomo zikhusela inqanaba le-2.6 yeedola, amaxabiso anokuqhubeka nentshukumo yayo yokuqhubela phambili isiya kwi-3.0, $ 3.3 kunye ne-3.7 yeedola zokumelana.
Amanqanaba okumelana: $ 3.0, $ 3.3, $ 3.7
Amanqanaba enkxaso: $ 2.6, $ 2.3, $ 1.8
I-ADA / i-USD yexesha elide iTrend: Bullish
Kwitshathi yemihla ngemihla, i-ADA / i-USD iyanyusa. Kwiveki ephelileyo ingqekembe ihleli iphantsi kolawulo lweenkunzi. Uxinzelelo lweenkunzi luye lwatyhala ixabiso ukuya kwinqanaba lokuchasana kwi-3.0. Inqanaba elikhankanyiweyo liphethe kwaye ixabiso lityhalelwa emva ukuvavanya inqanaba lenkxaso enamandla. Iinkunzi zichasene nentshukumo ye-bearish kwaye inyusa ixabiso ukuze iphinde ibonakale inqanaba lokumelana ne- $ 3.0 yesibini. ICardano ngoku iyancipha ukuya kwinqanaba lokuxhasa kwi- $ 2.6.
Itshathi yemihla ngemihla ye-ADAUSD, nge-Agasti 31
Ixabiso lithengisa ngaphezulu kwamaxesha e-9 EMA kunye namaxesha angama-21 e-EMA kunxibelelwano olusondeleyo kwaye ii-EMA ezimbini zahlulwe kakuhle omnye komnye njengophawu lwamandla abuthathaka. Ixabiso linokujika kwinqanaba le-3.0. Umgangatho weBullish unokumiswa kwinqanaba lokumelana ne- $ 3.0 kwaye inokujongana nenqanaba lenkxaso kwi-2.6 yeedola, ukuba ingene, i-2.3 yeedola kunye ne-1.8 yamanqanaba anokujolisa. Kwimeko apho iinkunzi zeenkomo zikhusela inqanaba le-2.6 yeedola, amaxabiso anokuqhubeka nokunyuka kwayo ukuya kuthi ga kwi-3.0, $ 3.3 kunye nakwi-3.7 yeedola zokumelana. Isalathi sobugcisa Isalathi samandla esiDibeneyo samandla sikumanqanaba angama-60 kunye nomgca wesiginali olathe phezulu ujonge phezulu obonisa uphawu lokuthenga.
ICardano ikukuhambahamba kwitshathi yeeyure ezi-4. Ingqekembe ivavanye inqanaba lokumelana ne- $ 3.0 kabini kwiveki ephelileyo. Kubonakala ngathi uxinzelelo lweenkunzi luyaphela, kwaye uxinzelelo lweebhere alunamandla ngokwaneleyo ukuba lungaphula inqanaba lenkxaso le- $ 2.6. Ixabiso lixabisa ngaphakathi kwe- $ 3.0 kunye ne- $ 2.6 yamanqanaba.
Itshathi ye-ADAUSD yeeyure ezi-4, Agasti 31
Ixabiso liyarhweba ngokujikeleza amaxesha e-9 EMA kunye namaxesha angama-21 e-EMA njengophawu lokudityaniswa kwentshukumo. Ixesha lesalathiso samandla esimalunga ne-14 sikumanqanaba angama-50 kwaye umgca womqondiso ubonakalisa ukuthengisa umqondiso.
ISolana iyaqhubeka neRally phakathi kweDeFi kunye neNFT Frenzy
I-Solana (SOL) iyaqhubeka nokucima iirekhodi eziphezulu eziphezulu ngaphandle kwendlela yentengiso ebanzi ye-bearish. Abahlalutyi bacebisa ukuba izinto ezininzi ezisisiseko zibangela ukunyuka okutsha kwi-SOL.
Enye yezinto ezinjalo kukutyhilwa kwefayile ye- Ucinezelo Umnyhadala ocwangciselwe ukuba uqhubeke kamva namhlanje kude kube ngu-Okthobha 8. Ngenxa yesiphithiphithi esiwujikelezileyo, lo msitho unokonyusa ithemba kubatyali-mali nangaphezulu, uthumele i-SOL ukurekhoda phezulu.
Ngexabiso le- $ 118 (ngexesha lokushicilela), uSolana ukhuphiswano olomeleleyo ku-Ethereum kushishino lweDeFi. I-SOL okwangoku ithengisa nge-19% ngaphakathi kwi-intraday-wide kunye ne-50% kule veki, iyityhalela ekubeni ibe yeyona nkampani inkulu yesibhozo ngobukhulu ngentengo yentengiso.
Ngelixa injongo yoCinezelo ingaqinisekiswanga, abacebisi bacebisa ukuba inokwahluka phakathi kwenkqubo yokumbiwa kwemigodi kunye nokunikezelwa kweegranti zabaphuhlisi abasebenza kwiiprojekthi zeDeFi okanye abadali beNFT.
USolana Uba yiBlockchain ekhethiweyo nguMbulelo omkhulu kwiiNethiwekhi zokuSebenza kunye nokuSebenza
Ngonyaka ukuya kuthi ga ngoku, uSolana ukhule ngaphezulu kwe-6,000%, eyenza ukuba ibe yenye yezona nethiwekhi ziqhuba kakuhle ngo-2021. Ukunyuka kweemeteorali kwiDeFi nakwi-NFTs kuhlala kungoyena mqhubi mkhulu wenethiwekhi, njengoko inethiwekhi iye yaba nye Ezona zisetyenzisiweyo kuphuhliso lwezo projekthi, enkosi kwizantya zenethiwekhi kunye nokusebenza kwazo.
Ngabatyali mali abaninzi be-crypto abafuna ukwahluka kuthengiso lwe-cryptocurrency, ii-DEXs, iiprojekthi zeDeFi, kunye neeNFTs zonyuke kakhulu, zirhuqa uSolana. Umzekelo weeprojekthi ezinjalo kwi-Solana blockchain yi-Soldex, evumela abathengisi ukuba bafikelele kwii-algorithms ezixhotywe nge-AI ukuze baphucule amava orhwebo. Ukuxhasa isantya sokuthengiselana okukhawulezayo kwinethiwekhi, iSoldex (i-DEX) ikwavumela abasebenzisi ukuba bakwazi ukuqhuba okwenziweyo okwenyani, bathathe inxaxheba kulawulo loluntu, kwaye bakhuthaze ukuthengiswa kwemali.
Imisebenzi efana nale iqinisekile ukutsala abatyali mali abaninzi kwiqonga kwixesha elikufutshane, ukuqinisa ngakumbi ixabiso le-SOL.
tags Cryptocurrency, iindaba, SOL, Solana
I-Bitcoin Network Transaction Volume iyahamba phakathi kweNtengiso yeNtengiso
Nakuba Bitcoin (BTC) Iyaqhubeka nokuzabalaza ingezantsi kwe- $ 50,000 yamanqaku, iingxelo zibonisa ukuba inethiwekhi irekhode umthamo wentengiselwano obalulekileyo.
Umboneleli we-chain-analytics uGlassnode usandula ukuveza ukuba umthamo wentengiselwano ngeveki kwinethiwekhi ye-BTC inyukele kwirekhodi ephezulu, ngelixa inani labanini beethokheni lisaphola. Ngokwengxelo, umndilili wevolthi yokuthengiselana ngeveki iphakamile kwirekhodi ephezulu ngaphezulu kwe- $ 8 yezigidigidi. Ingxelo ibonise ukuba eli nani liphezulu ngama-50% kunerekhodi yangaphambili.
Kubalulekile ukuba uqaphele, nangona kunjalo, ukuba eli nani aliveli ngokuthe ngqo kutshintsho oluqhelekileyo. Kwakhona, idatha eyongezelelweyo ibonakalise ukuba isiQinisekiso sokuTshintshela isiQinisekiso kwi-USD siyasilela ukubonisa ukonyuka okufanayo nenani elikhankanyiweyo ngaphambili.
Oko kwathethileyo, esona sizathu sibangelwe ngumahluko kukuba i-spike evela kutshintshelo lwangaphakathi, exhaswa yi-mempool.
Okwangoku, i-Glassnode ityhile ukuba inani labanini beBitcoin lonyuka ngokuthe chu emva kwengozi yamva nje. Iingxelo zibonisa ukuba abatyali zimali abathengisayo batsaleleka kwindawo yentengiso ngexesha leempompo zexabiso kwaye babaleke xa isihla. Ngenxa yoko, inani lilonke leebhanti ze-BTC ezibambe enye okanye ngaphantsi kwe-BTC ediphithiweyo emva kokulungiswa kwaphakathi kuka-Meyi.
Amanqanaba aphambili eBitcoin aBukelweyo-Agasti 31
I-BTCUSD ihlupheke ngokukhawuleza ubusuku bonke njengoko iinkunzi zeenkomo zahluleka ukubuyisela i-49,000 yezigidi. I-cryptocurrency ebekiweyo ibekwe kwi-46,700 yeedola ngaphambi kokuthumela isaphulelo kumanqaku angama-48,000 eedola.
I-BTCUSD-Itshathi yeYure ezi-4
Nangona kunjalo, iinkunzi zeenkomo zihlala zingenamandla okulandela ukubuyela kwakhona njengexabiso lamaxabiso angaphantsi kwe- $ 48,000. Ukuba iinkunzi zeenkomo ziyaqhubeka neli nyathelo libuthathaka, sinokubona ukuphinda sibuyele kwindawo esezantsi- yeedola ezingama-46,000. Oko kwathethi, ikhefu elingaphezulu kwe- $ 48,000 yamanqaku kwikota ekufutshane inokumisa intshukumo ye-bearish kwaye incede iinkomo ziqokelele amandla okunyusa ixabiso liphezulu.
Okwangoku, amanqanaba ethu okuchasana akwi- $ 48,000, i- $ 49,500, kunye ne- $ 50,500, kwaye amanqanaba ethu enkxaso aphambili ayi- $ 47,000, $ 46,000, kunye ne- $ 45,000.
Imali iyonke yentengiso: $ 2.09 zezigidi
Imali yeNtengiso yeBitcoin: $ 893 billion
I-Bitcoin Dominance: 42.7%
I-GBP / i-USD iqala kwakhona kwi-Uptrend, kwiMfazwe yokuXhathisa kwinqanaba le-1.4000
Amanqanaba okuGxila aphambili1.4200, 1.4400, 1.4600
Amanqanaba enkxaso aphambili1.3400, 1.3200, 1.3000
I-GBP / iXabiso leDola yeXesha elide iTrend: Ukuthwala
IGBP / USD ibikukuhamba ecaleni ukusukela ngoJulayi. Namhlanje, iphawundi inyukela phezulu emva kokuwa kwinqanaba le-1.3620. NgoJulayi, imarike ibuyise kwakhona i-1.3620 ephantsi kwaye yaqala kwakhona yenyuka yaya kwinqanaba le-1.4000. Namhlanje, abathengi batyhala isibini ukuya kwinqanaba eliphezulu langaphambili le-1.4000. Ukuhlaziywa kuya kuqhubeka kwakhona ukuba amaxabiso aphule ngaphezulu kwenqanaba le-1.4000. Ngaphandle koko, ukuhamba okubophelelayo kuya kuqhubeka.
I-GBP / i-USD ikwinqanaba lama-49 laMandla oMandla aNxulumene noko. Oku kuthetha ukuba kukho ulungelelwaniso phakathi konikezelo kunye nemfuno. I-SMA yeentsuku ezingama-14 kunye nee-SMA zeentsuku ezingama-21 zijike ngokuthe tyaba zibonisa indlela esecaleni. Iibini ziyakwazi ukuwa phantsi.
Kwitshathi yeeyure ezi-4, esi sibini siyenyuka sokwaphula ngaphezulu kokumelana kwinqanaba le-1.4000. Ukunyuka okuphezulu akuthandabuzeki njengoko imarike ifikelela kwingingqi ethengiweyo. Okwangoku, kwi-Agasti 27 uptrend; umzimba wekhandlela ovavanywe ngokutsha uvavanye inqanaba lokubuyiselwa kwe-Fibonacci engama-61.8%. Ukubuyiselwa kwakhona kubonisa ukuba iphawundi inokuthi inyuke iye kwinqanaba le-1.618 yeFibonacci eyandisiweyo okanye inqanaba le-1.3842.
Iphawundi ingaphezulu kwenqanaba lama-80% le-stochastic yemihla ngemihla. Imarike ifikelele kummandla othengwe ngaphezulu. Abathengisi banakho ukuvela kwingingqi ethengiweyo. Iintsuku ezingama-21 kunye neentsuku ezingama-50 ze-SMA zijike phezulu zibonisa inkqubela phambili.
I-GBP / i-USD iphinde yaqala ukuya phezulu kodwa ijongene nokuchasana kwinqanaba le-1.4000. Nge-27 ka-Agasti, esi sibini sagxothwa njengoko iponti yawela emazantsi e-1.3740. Isibini siqala phezulu sokwaphula ukuxhathisa kwinqanaba le-1.4000. Ukuqhawuka kuya kubonisa ukuqala kwakhona kwe-uptrend. Ngokwesixhobo seFibonacci, iponti iya kunyuka iye kwinqanaba le-1.618 yeFibonacci eyandisiweyo okanye inqanaba le-1.3842.
tags IGBP / USD, Uhlalutyo lwamaxabiso
I-AUDJPY iya kuthi ibhuqe iZowuni eziPhambili ngaphambi kokuba iqhubeke intshukumo
Uhlalutyo lweNtengiso lwe-AUDJPY-Agasti 30
I-AUDJPY iya kubuyisa amanqanaba athile aphambili kwibhidi yokugcina usihla ezantsi. Kangangexesha elithile ngoku, amaxabiso ebehlile. Ixabiso liye latyibilika ezantsi kwaye lidlula amanqanaba aphambili. Emva kokuphinda ubuye kwimisebenzi kwinqanaba lamaqhosha angama-81.600, i-AUDJPY iqhubekile isiya ezantsi. I-AUDJPY yehle yaphantsi komgca wendlela yokuhamba kunye nenqanaba eliphambili lemfuno kwi-80.200 ngaphambi kokutyibilika udlule omnye ummandla ophambili kwi-79.000. Uxinzelelo olungenantlonelo, olubangela utshintsho kwintengiso, lukhuphuke kakhulu. I-AUDJPY idala indawo ephezulu esezantsi ngaphambi kokuba amaxabiso aqhubeke nokudodobala kwayo.
Amanqanaba abalulekileyo e-AUDJPY
Amanqanaba okubonelela: 81.600, 80.200
Amanqanaba eMfuno: 79.000, 77.900
I-AUDJPY yexesha elide iTrend: Bearish
I-AUDJPY iyaqhubeka nokuwa ngenxa yokophula inqanaba lemfuno lama-80.200. Ixabiso kufuneka lenze ukubuyiswa okuzinzileyo ngaphambi kokuthwala i-ajenda ye-bearish. Oku kubuyiselwa endaweni kuya kubangelwa luxinzelelo oluphezulu, kwaye iinkunzi zeenkomo ziya kuzama ukunyuka ngaphambi kokuba i-AUDJPY iqhubeke nokuntywila.
I-AUDJPY iqhubeka nokunyuka, ngexabiso elijolise ekophuleni ngaphezulu kwe-80.200 ngaphambi kokubuyela umva. Ixabiso ekuqaleni libonelela ngokuthengwa okunokubakho kwixesha lemihla ngemihla xa litshintsha indawo kwindawo ye-77.900 yebango. Nangona kunjalo, oku kubangelwe kukuqhekeka kwe-AUDJPY kwiBollinger Band. Ixabiso ngoku lilungele ukoyisa ibhendi ephakathi kwaye inyuke ukubuyisela ibhendi ephezulu ngaphambi kokuba ixabiso liqhubeke nokudipha.
I-AUDJPY yeXesha elifutshane leNdlela yokuQala: UkuQala
I-AUDJPY iqikelelwe ukuba inyuke ngaphezulu kwama-80.200, iphinde ibeke imimandla ebalulekileyo kwisakhelo seyure ezi-4 ngaphambi kokuba iqhubeke. Ngaphambi kokubuyiselwa kwakhona, imarike inokuqhekeza umgca wokuhamba kwaye isabele kwi-81.600. Isalathiso seBollinger Band sibonisa iimpendulo zentengiso kwinqanaba eliphezulu. Oku kuphakamisa ukubuyela umva kwe-bearish xa imarike ibuyela umva kuloo ndawo. I-MACD (Ukuhambisa umndilili wokuDibana kunye nokuDibana) ibonisa imivalo ye-histogram yokuphakamisa ebonisa ukunyuka okuphezulu kunye neminqamlezo ebonisa ilahleko kwimpembelelo yempembelelo. Oku, nangona kunjalo, kubonisa ngokucacileyo ukuba abathengisi kungekudala baya kulawula imarike.
tags AUDJPY, Itshathi yemihla ngemihla, Ulindelo lweNtengiso, Price Action, Uhlalutyo Technical
← Entsha izithuba1 2 ... 24 abaDala izithuba →